नयाँ सिमकार्ड लिनुभएको छ ? कल सेन्टरबाट फोन आउन सक्छ । – email khabar | Latest news of Nepal
प्रकाशित : २०७७ वैशाख १४ गते १७:५९
वैशाख १४, काठमाडौ -के तपाईँ सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको समयअघि वा पछि आउनुभएको छ ? सो समयको आसपासमा तपाईँ देशभित्र आएर दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको नयाँ सिमकार्ड खरिद गर्नुभएको छ र सञ्चालन गरिरहनुभएको छ ? यदि छ भने तपाईँलाई जुनसुकै बेला पनि नेपाली सेनाको छाउनीस्थित रेञ्जर गणमा रहेको कल सेन्टरबाट फोन आउन सक्छ ।
प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार कल सेन्टरमा हरेक दिन बिहानदेखि साँझसम्म नै नेपाली सेनाको जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । उनीहरुले दैनिक औषतमा दुई हजार फोन गर्ने गरेका छन् । कार्य समय मिलाएर जनशक्ति परिचालन गरिएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता पाण्डेले दुई भिन्न स्थानबाट १०–१० का दरमा परिचालित २० जनाले कल सेन्टरबाट फोन गर्ने गरेको बताए।
सेन्टरबाट विशेषगरी यतिबेला प्रदेश नं २ का विभिन्न जिल्ला तथा आगामी दिनमा प्रदेश नं ५ मा ध्यान केन्द्रित गर्न लागिएको छ । “जुन स्थानमा जोखिमको मात्रा बढी देखिएको छ, सोही स्थान हेरेर फोन गरिएको छ”, प्रवक्ता पाण्डेले भेन, “सकेसम्म नयाँ सिमकार्ड लिएकाहरुले पनि आफू सुरक्षित वा असुरिक्षत के हो भन्नेबारेमा जानकारी दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।”
यस्तै नेपाल टेलिकमले कोरोना सङ्क्रमणबारे जानकारी दिन १४१९ मा डायल गरी सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिन सकिने व्यवस्थासमेत गरेको छ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले समेत सोही प्रकारको व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयार पारेको बेवपेज तथा मोबाइल एपमा समेत स्वास्थ्यस्थितिका बारेमा स्वमूल्याङ्कन फारम भर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसरी फारम भर्नेको सङ्ख्या कूल २५ हजार ९०६ पुगेको छ । त्यसमा कूल २२९ जना सम्भावित सङ्क्रमित देखिएको छ । कल सेन्टरबाट पत्ता लागेको ५७ र बेव तथा एपबाट पत्ता लागेका कूल २२९ गरी २८१ जना सम्भावित सङ्क्रमितको विवरणसहितको सूची तयार पारी इपिडीमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका साथै सम्बन्धित माशाखाका साथै सम्बन्धित प्रदेशमा आवश्यक अनुगमन तथा पहिचान गर्न पत्राचार गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले जानकारी दिए ।रासस